အောက်တိုဘာလ 25, 2015 မှာ 1: 46 နံနက်
၎င်း၏နယူးယောက်စာမျက်နှာ bt နှောင့်အယှက် coz t ကိုအက်ပလီကေးရှင်းအနည်းငယ်ရှိသေးသည် app ကိုရရန်ကြာမြင့်စွာ en ကြာထပ်မံဖွင့်သည်စောင့်ရှောက်တတ်၏
အောက်တိုဘာလ 17, 2015 မှာ 11: 40 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 25, 2015 မှာ 5: 15 ညနေ
ဓာတ်ပုံတွေ upload ခွင့်မပေးပါဘူး
စက်တင်ဘာလ 8, 2015 မှာ 6: 52 ညနေ
ဤမူကွဲသည်ကျွန်ုပ်၏ Nokia N1 တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းကိုလိုချင်သည်။ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှနောက်ဆက်တွဲဗားရှင်းများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်စနစ်တကျတပ်ဆင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဇွန်လ 14, 2015 မှာ 2: 16 ညနေ
မေလ 26, 2016 မှာ 7: 54 ညနေ
ဇွန်လ 6, 2015 မှာ 8: 05 နံနက်
အံ့သြဖို့ကောင်းတယ် !! ဒါကကျွန်တော်တို့မကြာခင် update လုပ်ထားတဲ့ version ကိုရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးပဲ။
မေလ 26, 2015 မှာ 12: 21 နံနက်
ငါဖုန်းကိုတကယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ instagram ကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့ tablet ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2015 မှာ 12: 34 နံနက်
ငါဒီထက်ပိုပြီးအက်ပလီကေးရှင်းတွေရနိုင်တဲ့ geat site တစ်ခုဖြစ်သည် !!!!!!!!!!!
ဇန်နဝါရီလ 16, 2015 မှာ 3: 08 နံနက်
ဒီ site ကိုအံ့သြဖို့ကောင်းတာကမင်းသင်လိုချင်တဲ့ app ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 21, 2014 မှာ 1: 25 ညနေ
ဧပြီလ 4, 2015 မှာ 1: 02 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2014 မှာ 5: 56 ညနေ
အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသော site ကို
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2014 မှာ 11: 37 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2014 မှာ 11: 34 နံနက်
အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသော site! အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Irih badih says:
နိုဝင်ဘာလ 27, 2014 မှာ 3: 14 နံနက်
Damara Arafael says:
အောက်တိုဘာလ 24, 2014 မှာ 7: 33 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 27, 2014 မှာ 3: 13 နံနက်
ဒီ site ကအရမ်း gooood
Ahmed Elshreif says:
အောက်တိုဘာလ 1, 2014 မှာ 6: 13 ညနေ
ပိုပြီးအက်ပ်များ .add အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ site ကို
စက်တင်ဘာလ 30, 2014 မှာ 12: 01 ညနေ
ငါ့အကြိုက်ဆုံးစာမျက်နှာ ... အလွန်ကောင်းတဲ့။ အများကြီးကူညီပေးသည်
စက်တင်ဘာလ 30, 2014 မှာ 7: 00 နံနက်
ဒီ site ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ငါ dis site ကိုတွေ့ပြီဝမ်းသာပါတယ်။
DJ Squaek, G says:
စက်တင်ဘာလ 13, 2014 မှာ 5: 19 နံနက်
apk thax များအတွက်အလွန်ကောင်းသော site ကိုတကယ်ကူညီပေးခဲ့သည်
iran အတွက် ali says:
စက်တင်ဘာလ 1, 2014 မှာ 11: 39 ညနေ
မကောင်းဘူးမဟုတ်၊ ပုံမှန် web မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့ပိုကြီးတဲ့ site ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိနိုင်တယ်။
jaspreet Shergill says:
သြဂုတ်လ 27, 2014 မှာ 10: 53 နံနက်
အရမ်းကောင်းသော site .but apps များထပ်ထည့်သည်။
သြဂုတ်လ 27, 2014 မှာ 10: 46 နံနက်
ပိုကောင်းသော app များကို .add အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ site ကို
သြဂုတ်လ 10, 2014 မှာ 5: 14 ညနေ
အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက် Nyc site
ဇူလိုင်လ 28, 2014 မှာ 9: 05 ညနေ
apk.but ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံး site သည်၎င်းတွင် app အနည်းငယ်သာရှိသည်
Muchammad Bagus Rahman Faruq says:
ဇူလိုင်လ 22, 2014 မှာ 4: 45 နံနက်
Android ဗားရှင်းကို Froyo 2.2.1 လုပ်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်မရ
ဇူလိုင်လ 3, 2014 မှာ 6: 12 ညနေ
ဇွန်လ 26, 2014 မှာ 2: 44 ညနေ
ဒါဟာငါ့ကို networrk erorr whyyy ပြောပြသည်: (((((
Waleed Bakhat says:
အောက်တိုဘာလ 29, 2014 မှာ 12: 18 ညနေ
ချစ်ခင်ရပါသော network signal သည် week plz wait ဖြစ်ပြီးထပ်ကြိုးစားပါ။ …။
အောက်တိုဘာလ 17, 2015 မှာ 3: 02 ညနေ
မတ်လ 8, 2016 မှာ 3: 16 နံနက်
ဇွန်လ 12, 2014 မှာ 8: 00 နံနက်
အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသော site ကို။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဧပြီလ 15, 2014 မှာ 9: 07 နံနက်
အလွန်ကောင်းသည် !! APK အတွက် Awesome Site
ဧပြီလ 2, 2014 မှာ 12: 35 နံနက်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ကောင်းသောစာမျက်နှာကိုငါ buttuna နှင့်ငါသင်2လက်မကောင်းသောအလုပ်တက်ပေးပါ
12နောက်တစ်ခု "